Tartanka Premier League:- Kooxaha Chelsea Iyo Everton Oo Wada Ciyaari Doona? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Chelsea ayaa kulan qiimo weyn ugu fadhiya ku martigelin doonta Everton, waxaanay u baahan tahay inay guul hesho si ay usii xajisato booskeeda kaalinta afraad, kaas oo ay lumin doonto haddii laga badiyo, isla markaana ay Manchester United guul ka gaadho Man City.
Blues ayaa garoonkeeda Stamford Bridge ku qaabilaysa Everton oo uu hoggaaminayo macallinka ruug-caddaaga ah ee Carlo Ancelotti oo koobabkii uu u qaaday ay wali xasuusan yihiin jamaahiirta Chelsea, hase yeeshee markii uu tegay kooxda Toffees waxa uu kula bilowday guulo iyo dibu-soo noolayn ka hor intii aanay xilli dambe dhibaatooyinka dib u dhex-gelin.
Everton waxay ku jirtaa kaalinta 11aad, waxayse fursad u haysataa inay sare ugu soo ruqaansato kaalmaha sare iyadoo la dhibco noqon karta Arsenal oo haysata 40 dhibcood.
Tababaraha Chelsea, Frank Lampard oo culays weyn ay ku keentay guul-darradii bahdilaadda ahayd ee Bayern Munich, waxa xummad jabin u noqotay bandhiggii kooxdiisa ee Bournemouth iyo Liverpool, waxaana damaashaadkii Stamford Bridge ee 2-0 ka ah ku karbaasheen kooxda Klopp ay maanta qaabbilayaan tababarahoodii hore ee farsamada iyo khibradda badan ee Ancelotti.
Everton oo barbarro lasoo gashay ciyaartii hore kooxda Manchester United oo gool uu qaladkiisa lahaa David de Gea uu dhaliyey Dominic Calvert-Lewin daqiiqaddii lixaad, waxa isaguna qalad sameeyey Jordan Pickford oo kooxda Solskjaer u sahlay inay dhaliyaan goolka barbarraha, hase yeeshee waxay maanta isku hallayn doonaan Richarlison oo udub-dhexaad u ah bandhigga kooxdiisa oo dhaliya ama caawiya si joogto ah.
Tababare Carlo Ancelotti oo kulamo adag oo musalsal ah ay iskugu xigaan, waxa ciyaarta Chelsea kaddib ay la dheeli doonaan Liverpool iyo Leicester City oo ugu tegi doona Goodison Park, iyadoo ay kaddibna u safri doonaan Tottenham Hotspur, Wolves iyo Sheffield United, waana lix ciyaarood oo adag, kuwaas oo marka lagu daray kan Chelsea iyo kii hore ee United ka dhigaya jadwalkii ugu adkaa ee Toffees ay baryahan xidhiidh u gasho.
Marka la eego bandhigga labada kooxood ee lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee Premier League, Chelsea waxay soo guuleysatay hal mar oo kaliya dhamaan lixdii ciyaarood ee horyaalka ee ugu dambeeyey, saddex barbarro ah iyo laba laga badiyey ayaana u raacay. Everton waxa iyaduna ay soo adkaatay laba kulan, saddex barbarro ah iyo hal kulan oo guul-darro ah.
Wararkii ugu dambeeyey ee labada kooxood.
Kaddib bandhig cajiib ah oo uu sameeyey kulankii Liverpool oo uu shabaqiisa nadiif ka dhigtay, goolhaye Kepa Arrizabalaga ayaa la filayaa inuu booskiisa xajisto oo kaydka loo diro Willy Caballero, laakiin waxa Lampard ay tahay inuu xal u helo maqnaanshiyaha Jorginho oo ganaax ah, Mateo Kovacic iyo N’Golo Kante, waxaase diyaar ah Gilmour, Barkley iyo mason Mount.
Laacibka reer Brazil ee Willian ayaa isaguna dhaawac ah, waxaana maqnaanshihiisa ka faa’iidaysanaya Reece James.
Dhinaca Everton, daafaca Seamus Coleman ayaa dhaawac ku maqan, waxaana booskiisa buuxin doona Djibril Sidibe, halka Yerry Mina iyo Lucas Digne ay diyaar u yihiin.